Ukuhamba izinja, ezifuywayo ngezimoto
Igcine ukubuyekezwa: May. 19 2018 | 5 imiz ufunde
Uyazi bafuna ukuya endleleni – kungani uthathe kubo?
Qinisekisa nezilwane ezifuyiwe ziphilile, ukuhlela ukuvakashelwa nge udokotela wezilwane wakho, Iyokwaziwa kwaJuda ivuselele iyiphi isibhamu ezisebusweni ngenxa. Ezinye Amahhotela manje bafuna ukuba nina abonise ubufakazi bokuthi shot irekhodi isilwane sakho sika wamanje.
Qiniseka ukuba ngibanike ekwelapheni izenze futhi ubeka luphawu imithi njengoba kungenzeka kwezinye izindawo zigcwele namazeze namakhizane. A ekwelapheni heartworm imithi Kunconywa kusukela ungakwazi umiyane ukuthelela isilwane sakho.
Hlola izimpahla zabo: (ukupakisha zonke isilwane sakho Izinto nesikhwama esisodwa esincane lapho ungathola kukho)
A leash futhi collar, ithegi igama isilwane (ngethemba has a inombolo yefoni kuso lapho umuntu uyophendula, inombolo cell phone mkhulu).
Amanzi asemabhodleleni, futhi a dish amanzi (okungcono uhlobo akusho igeleze)
A supply of isilwane ukudla, a dish and mhlawumbe spoon, futhi ungakhohlwa awukudla
A ibhulashi pet, ukuphulula Shampoo uma uya zingasekho isonto noma ngaphezulu
A toy noma ezimbili, futhi into ngabo ukulala on.
Ungakhohlwa izimpahla zabo medical:
Udlawana for nokususa burrs
Eye yokuhlanza drops
A idivayisi pet ukuvimbela (like ibhande lokuphepha kuphela izilwane)
Izikhwama Plastic for ngiphakamisa emva isilwane sakho.
Okuphakelayo isilwane sakho ukudla okulula amahora ambalwa ngaphambi nimuke bese kona uhamba ibanga elide ngaphambi kokuba uqale uhambo lwakho.
Into yokuqala ukuba uqaphele lapho sisebenzelana imoto ukugula ukuthi 95% amacala kuba ukucindezeleka okuhlobene hhayi motion ahlobene. Pet wakho angase isho uhambo ngemoto nge kokuba kuyasuswa ekhaya layo lokuqala, noma kuyiwe Vet noma nakakhulu, the Kennel. Ngakho, hhayi yayo akumangalisi ukuthi ugibele ezalandela emotweni kufanele kuvuse ukuhlukumezeka uqine kakhulu ngokwengqondo futhi okwalandela ngokomzimba.
Re-program sengqondo pet yakho towards travel in a car. Thola park mayelana 5-10 amaminithi kusuka ekhaya, kuhle babe omunye emotweni too, ukupholisa inja ukumphazamisa the ride. Gcina kuye happy yonke indlela epaki. Uma at the park ukwenza zonke izinto ezimnandi ukuthi inja uthanda, ukulanda ibhola, futhi ukuxosha Frisbee. The ukuhlala at the park akudingeki ukuba isikhathi eside…. nje kujabulise ngangokunokwenzeka. Bese ukushayela ekhaya inja iletha kuye yonke indlela aphinde futhi lapho ekhaya wenze isikhathi nje esiningi inja njengoba owakwenza park. Awuqede session nge ukudla noma uswidi uma isikhathi kanye nemibandela yezimvume.
Manje isilwane sakho ngeke manje ukuzihlanganisa car with travel izikhathi fun.
Ukuhamba ezingenalutho. Kuwumqondo omuhle hhayi ukondla isilwane sakho amahora ayisithupha kuya ayisishiyagalombili ngaphambi kokuqala uhambo ngemoto. Ukuba ungadlile uyokwenza engaphansi cishe baphonse up, futhi uma kwenzekile sangenwa ukugula, akukho ukudla ebuhlanzweni, okungenani-ke kulula ngilungise. Ukunikeza amanzi akho pet, Nokho, ngeke ukucasula esiswini sakhe futhi kungamenza bekhululeke kakhudlwana.
Noma efakwa quarter-tank. Nakuba abanye ezifuywayo ukuhamba best on esiswini esingenalutho, abanye bayoyithanda emva kokudla isidlo encane. Ezinye ezifuywayo nje badinga ukudla okuncane esiswini yabo ukuze basize abagcine bangaguli.
Thatha frequent ukuphumula breaks. Nakuba abanye ezifuywayo angahamba amahora ngaphandle kokuba nezinkinga, abanye baqala ukuthola queasy emva ngamakhilomitha ambalwa. Thola ukwazi iphethini isilwane sakho bese ayeke okungenani njalo ngehora elilodwa noma amabili kuya uhambe bayashesha ukunikeza usizo isilwane sakho uthole bakhe ezweni-imilenze emuva. Kuba Kuwumqondo omuhle ukuze uthele kuyo amanzi kancane, njengoba angeke awubone like ukuphuza lapho kusuke emotweni.
Yiba up-front naye. Akukho ukunyakaza njengoba okuningi in emotweni njengoba emhlane, ngakho-ke kungase kusize isilwane sakho uma uvumela wamgibelisa esihlalweni esiphambili emotweni, kodwa uqiniseke ukuthi in a ngebhande lemoto doggy noma indlu yenja encane ukuthi buckles singene esihlalweni.
Nweba HORIZONS yakhe. Pets, like abantu, mancane amathuba okuba athole carsick lapho ubuke indawo odlulayo.
Crank phansi amafasitela. Air Fresh kuhle ubani ozwa carsick kancane, kuhlanganise inja yakho noma cat, kodwa musa ukuvula iwindi ngokwanele ukuze angakwazi ukubaleka noma uthole ikhanda lakhe way out.
Zama a potion motion. Dimenhydrinate (Abanye Dramamine) — isidakamizwa abantu efanayo bathathe ukuba bagweme imoto ukugula — futhi usebenza izilwane. Medium izinja ezinkulu kufanele inikezwe 25 to 50 angu Dramamine okungenani ihora ngaphambi kokuhamba, amakati nezinja amancane kufanele uthole mayelana 12.5 angu. Qiniseka ubuze udokotela wezilwane wakho ngaphambi kokunikeza isilwane sakho yimuphi umkhiqizo zokwelapha.
UKULUNGISELELA CAR YAKHO
ukudala indawo lapho isilwane sakho kungaba agibele ngokuphepha futhi namanje ubone ngefasitela, futhi bakwazi ukuba wathinta nguwe. Behleli ethangeni lakho ngenkathi ushayela akulona umqondo umhlabeleli. Bayoba kudingeka ukufinyelela amanzi abo kanye.
A ngengubo noma a soft isilwane embhedeni kungaba omkhulu kangaka bazizwa besekhaya.
Ungakhohlwa idivayisi ukuvimbela, ungafuni kubo endiza somoya uma kufanele ayeke ngokuzuma.
Uma ikati lakho ohamba nawe wenze indawo udoti kitty. Behind the front isihlalo isebenza kahle kwezinye izimoto. Okokuqala walala phansi ucezu plastic (isikhwama kadoti uyokwenza).
Kungenzeka isilwane sakho uzalala ngamaphesenti ayisishiyagalolunye of the time lapho kungukuthi looking ngefasitela noma ukuthola ezifuywayo ezivela kuwe.
Udinga ukumisa zonke 2 to 3 amahora ukuvumela Fido yokwelula izinyawo zakhe.
UNGALOKOTHI bayekeni IN THE CAR
Cars Modern cishe air tight futhi isilwane zodwa imoto usengozini hhayi ukuthola umoya ngokwanele, noma ukuhlupheka ukushisa. Nakuba izinga lokushisa komoya kuphela 70 degrees imoto in the sun angathola hot kakhulu.
Sethemba wena wabheka Pet Travel web site futhi ibibhukelwe isilwane hotel friendly noma motel online. Uma hotel / motel uyala imali pet uyikhokhe, ningazami ukufihla isilwane sakho, uzochitha ubusuku bonke ukukhathazeka mayelana zingabanjwa.
Uma ufika ucele egunjini phansi emhlabathini eduze endaweni lapho ungakwazi ukuhamba Fido. Igceke isikhungo akuyona indawo kwesokudla. Qiniseka ukuthi ayothatha emva isilwane sakho ukuze hotel / motel uzohlala pet friendly.
Iningi yokuhlala cela ukuthi musa ukushiya pet yedwa ekamelweni ngenxa yezizathu ezisobala. Ungase ube oda athathe noma igumbi service, noma uma kuyinto cool ngokwanele ukuba isilwane sakho ukuba ehamba ngemoto isikhathi esiyihora nengxenye noma ngakho bakwazi ukuphuma dinner uthathe kubo kanye. Ungase uthole ngisho isilwane yokudlela friendly, bheka for izindawo ongaphandle zihlalo izindawo like zabahamba amathilomu.
Nina baye bafinyelela DESTINATION YAKHO
Bonisa pet yakho nxazonke ekhaya labo elisha, lapho ubeke ukudla kwabo, amanzi, umbhede.
Uma isilwane sakho ikati, ubabonise indawo kitty udoti ibhokisi. Fido kuyodingeka azi lapho okufanele uhambe kahle.
Usukulungele ukujabulela iholide lakho kule nkampani umngane wakho best.
Ngokuba iminyaka emihlanu Anna Lamb, 36, oye wahlushwa ukucindezeleka. Useke wafuna usizo…